भदौ ३०, जनकपुरधाम । भदौ २५ गते जनकपुरधाम उपमहानगरपलिका–७ मुसहरबस्तीबाट दुईजना हातहतियारसहित पक्राउ परे । प्रहरीले हतियार खरीद, विक्री भइरहेको गोप्य सूचनाको आधारमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२५ लोहनाका २१ वर्षीय अजयराज कायस्थ र सोही ठाउँ बस्ने २४ वर्षीय सुनिल मण्डललाई पक्राउ ग¥यो । उनीहरूको खानतलासी गर्दा एक थान पेस्तोल र त्यसमा लाग्ने गोली बरामद भएको थियो ।
यस्तै, भदौ २० गते विदेह नगरपालिका–९ खरीहानीबाट चोरीपैठारीको सामान प्रहरीले बरामद ग¥यो । स्थानीय गफुर नदाफको घरबाट ५०० केजी हरियो मटर (केराउ) बरामद भएको थियो । सोही ठाउँबाट प्रहरीले रू. २ लाख १३ हजार ४ साहको रेडिमेड कपडा पनि बरामद गरेको थियो । प्रदेश २ का जिल्लामा कोरोना महामारीको बेला भइरहेको अवैध कारोबारका यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् ।
प्रदेश २ का जिल्लाहरूमा हुण्डी कारोबार समेत ह्वात्तै बढेको पाइएको छ । पैसाको स्रोत खुलाउनु नपर्ने र भनेको बेला एजेन्टमार्फत सजिलै पैसा पठाउन सकिने भएकाले अवैध हुण्डीको कारोबार बढेको हो । प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा हुण्डीमार्फत आएको रू. ९४ लाख ५१ हजार मात्र बरामद भएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महीनामै हुण्डी कारोबारको रकम ७८ लाख ५८ हजार ३२० रुपैयाँ बरामद भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले बताएको छ । प्रहरीको तथ्यांक अनुसार नेपालमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा अवधिमा हुन्डी कारोबार बढेको छ ।
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सिमानामा प्रहरीले कडाइ गरेपछि भारतबाट दैनिक लाखौं रुपैयाँ हुन्डीमार्फत आइरहेको प्रहरीको भनाइ छ । लकडाउन तथा निषेधाज्ञा अवधिमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा प्रभावित भएकाले पनि भारतबाट हुन्डी कारोबार बढेको सशस्त्र प्रहरी प्रदेश २ का प्रमुख एवं डीआईजी कृष्णभक्त ब्रह्माचार्यले बताए । पछिल्लो केही दिनयता भारतबाट अवैध रूपमा पैसा भित्रिने क्रम बढेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले पनि लाखौं नेपाली भारतमा मजदूरी गरिरहेका छन् । लकडाउनका कारण बैंक वित्तीय संस्थाहरू बन्द रहेको अवस्थामा हुन्डीमार्फत नै घरमा पैसा पठाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘लकडाउनमा आर्थिक अवस्था नाजुक भएर पनि कतिपय नेपालीले भारतमा रहेका आफ्ना नातेदारसँग सापटीका रूपमा पैसा मगाउने गरेको पाइएको छ ।’